တရုတ် 7H ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဆလင်ဒါခေါင်း ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Zhengheng
7H ဒီဇယ်အင်ဂျင် ဆလင်ဒါခေါင်း
မော်ဒယ်- ၇ နာရီ
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်အချက်များ- တစ်ဦးချင်းစီထုပ်ပိုးခြင်း + ကြမ်းပြင်သေတ္တာ;155cm * 165cm6ခု/ပုံး
ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည်: တစ်နှစ်လျှင် 1000000 ကျပ်
sulfonic အက်ဆစ်ကို ကုသပေးသည့် အေးဂျင့်ကို ထုလုပ်ခြင်း။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းနှင့် ထူးခြားသောဆီချွေတာသည့်နည်းပညာဖြင့် 7H အင်ဂျင်ဆလင်ဒါဘလောက်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဤ 7H ဆလင်ဒါခေါင်း၏ အပြုသဘောဆောင်သော အဆက်မပြတ် ပါဝါထုတ်လုပ်မှုသည် ဆီစားနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ ပေါ့ပါးပြီး အားကောင်းသည့် ပါဝါဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်။တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ထုတ်ကုန်အား မြင်းကောင်ရေ မြင့်မားပြီး ဆွဲငင်စွမ်းဆောင်မှု ကောင်းမွန်သော စိုက်ပျိုးရေးထွန်စက်ကြီးများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ကျယ်ပြန့်သော လယ်ယာသုံးကိရိယာများပါရှိသော ခြံကြီးများတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် သင့်လျော်သည်။
ဆလင်ဒါခေါင်းကို ဆလင်ဒါဘလောက်၏ထိပ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ဆလင်ဒါကို ထိပ်မှပိတ်ကာ လောင်ကျွမ်းမှုအခန်းကိုဖွဲ့စည်းသည်။၎င်းသည် မြင့်မားသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားမြင့်ဓာတ်ငွေ့တို့နှင့် မကြာခဏ ထိတွေ့နေရသောကြောင့် ၎င်းသည် ကြီးမားသော အပူဝန်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ကို ဆောင်သည်။ရေအေးပေးထားသော အင်ဂျင်၏ ဆလင်ဒါခေါင်းကို အအေးခံရေဂျာကင်တစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဆလင်ဒါခေါင်း၏ အောက်ဘက်စွန်းရှိ အအေးခံပေါက်ကို ဆလင်ဒါဘလောက်၏ အအေးခံရေပေါက်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။လည်ပတ်နေသောရေကို လောင်ကျွမ်းခန်းကဲ့သို့သော မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အအေးခံရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ဆလင်ဒါခေါင်းကို ယေဘုယျအားဖြင့် မီးခိုးရောင်သွန်းသံ သို့မဟုတ် အလွိုင်းသွန်းသံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။အလူမီနီယံအလွိုင်း၏အပူစီးကူးမှုသည် ကောင်းမွန်ပြီး compression ratio ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
အင်ဂျင်ဆလင်ဒါခေါင်းသည် အင်ဂျင်၏ အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ မြင့်မားသော တိကျမှု လိုအပ်ချက်များ၊ စီမံဆောင်ရွက်သည့် နည်းပညာသည် ရှုပ်ထွေးသည်၊ စီမံဆောင်ရွက်မှု အရည်အသွေးသည် အင်ဂျင်၏ အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု ရှိသောကြောင့်၊ အင်ဂျင်ဆလင်ဒါ ခေါင်းကို ပြုပြင်ခြင်းသည် အထူး အရေးကြီးသည်၊ ၎င်း၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ valve seat ring နှင့် pipe hole processing သည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
1. လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာဖြင့် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါခေါင်းထုတ်လုပ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လုပ်ငန်းအများအပြားနှင့် အောင်မြင်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းဝန်ထမ်းများရှိသည်။
1. မူရင်းထုပ်ပိုးမှု- 1PC/piece၊ 20 pieces/box (ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍ အရေအတွက်)ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း + ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးခြင်းသေတ္တာ
1. Cylinder head spot- စာရင်းရှိလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် 5-10 ရက်အတွင်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
2.OEM ထုတ်ကုန်များ - တရားဝင်ပုံဆွဲခြင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် 30-65 ရက်အတွင်းပေးပို့ရန်စီစဉ်ပေးလိမ့်မည်။(တိကျသောထုတ်ကုန်ပေါ် မူတည်.)
4. အစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် သင့်အားကူညီရန် အင်ဂျင်ဆလင်ဒါခေါင်းအစိတ်အပိုင်းများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ၀ယ်ယူခြင်း။
ယခင်- Cast အလူမီနီယံအင်ဂျင် FT1.5 ပိတ်ဆို့ခြင်း။
နောက်တစ်ခု: သွန်းသံဘောင် မော်ဒယ် ED10 အင်ဂျင်ဘလောက်
Cylinder Head Castings များ
Cylinder Head Cover စိတ်ကြိုက်
Cylinder Head Cover စက်ရုံ
Cylinder Head Cover ထုတ်လုပ်သူ
Cylinder Head Cover ထုတ်လုပ်သူများ
Cylinder Head Cover ကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
Cylinder Head Cover ထုတ်လုပ်မှု
Cylinder Head Cover ပေးသွင်းသူ
Cylinder Head စိတ်ကြိုက်
Cylinder Head စက်ရုံ
Cylinder Head ထုတ်လုပ်သူ
Cylinder Head လုပ်ဆောင်ခြင်း။
Cylinder Head ထုတ်လုပ်မှု
Cylinder Head ပေးသွင်းသူ
Cylinder Head ပြီးပါပြီ။
ဆိုင်ကယ် Cylinder Head
B12 ဆလင်ဒါခေါင်းကို အလူမီနီယံသွန်းလုပ်ထားသည်။